August 2013 - iftineducation.com
Sawirro: DF oo arrin ay ugu dambeysay 23 sano maanta u bandhigtay dadka
aadan21 / August 31, 2013
iftineducation.com – Waxaa maanta markii ugu horeeysay Bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa muddo 23 sano kadib waxa uu maanta qaadanayaa shaqaale cusub oo ku shaqeyn kara teknoloojiyadda cusub ee ay ku shaqeystaan bankiyada caalamka, iyadoo shaqalaaha cusub ee uu bankiga qaadanayo laga qaadayo imtixaan xagga aqoontooda ku saabsan. Sarkaal u hadlay maanta Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay in qaadista imtixaankani…
Daawo: Sheeko Qosol Badan oo Todobaadkaan Soo baxday , Wadaad fal falaaloow adigaaba qosli doona
iftineducation.com – Daawo: Sheeko Qosol Badan oo Todobaadkaan Soo baxday , Wadaad fal falaaloow adigaaba qosli doona Waa shiiko aad u xiiso badan oo ku saabsan Fal falaaloow oo ka hjadlaysa qisoo yin kala duwan. Halkaan Hoose Ka Daawo :
Daawo Muuqaalka: Wiil Aan Indho Lahayn Balse Wax Arkaya, SUBXANNALLAH
iftineducation.com – Subxannallah: Waa mucjiso, qof indho la’a balse wax arki kara! Waxaan halkaan idin kugu soo gudbinaynaa documentary laga sameeyay wiil lagu magacaabo Ben Underwood oo indhoole ah balse wax arki kara. Wiilkaan ayaa labadiisa indhood laga bixiyay markii uu jiray saddex sano kadib markii uu ku dhacay kansar xaga indhaha ah. Wiilkaan ayaa la sheegay inuu yahay qofka kaliya…
Kalluun sabab u noqday in dad badan ay diinta islaamka kusoo biiraan waa sidee?
iftineducation.com – Rag badan oo bad maaxayaal ah una kala dhashay dalal badan oo kala duwan ayaa badweynta India mar ay dhex maquuranayeen waxa ay la kulmeen arin mucjiso ah oo awoodda Rabbi swt daliil buuxda u ah. Ragga oo kaluumeysato ahaa ayaa la kulmay kalluun magaca Allah oo waadix ah dusha uga qoran yahay, taasoo ku noqotay mucjiso iyo wax…
Xoogaga Shabaab oo toogtay Sheekh Axmed Garaad, oo ku biiray Dowladda Somaliya
iftineducation.com – Xoogaga Shabaab ayaa waxay xukun dil toogasho ah ay ku fuliyeen Taliyihii Ciidamada Xisbada ee Al Shabaab ee Degmada Wanlaweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose Sheekh Axmed Garaad. Sheekh Axmed Garaad ayaa wuxuu sanadkii hore uu ku biiray Dowladda Federalka ee Somaliya, oo Al Shabaab dagaalo ugala wareegtay gacan ku heynta Degmada Wanlaweyn. Al Shabaab ayaa waxay sheegtay inay ka…
Khubaradii Qaramada Midoobay oo Siiriya isaga baxay iyo mareykanka oo iclaamiyay dagaal
iftineducation.com – Waxaa maanta ka baxay dalka Siiriya kooxdii ugu danbeysay oo kamid ahaa khubaradii ka socotay Qaramada Midoobay ee dalkaasi u joogay baaritaanka hubka Kimikalka ah ee la adeegsaday. Khubarada Qaramada Midoobay oo todobaadkan booqasho ku tagay qeybo kamid ah goobihii ay ka dhaceen xasuuqii loo adeegsaday hubka Kimikalka ayaa sheegay inay soo aruuriyeen xog badan oo ku aadan deegaankaasi…
Deg deg:Madaxweynaha Mareekanka oo haatan kudhawaaqay tallaabo Milateri Ka dhan ah laga Qaado Siiriya(Sawiro)
iftineducation.com – Kadib qadar yar kahor waxa shir jaraa id qabtay Madaxweynaha Dalka mareekanka Obama kasoo sheegay indhaha kafiirsan doonin dhibaatada kasocoto wadanka siiriya waxaana oo sheegay in Congress-ka ay weydiisan doonaan Ogolaansho. Obama ayaa ku eedeye xukumada kataliso Siiriya in dhibato xoogan ugeysatay shacabka gaar ahaan caruurta iyo haweenka asagoo sheegay in u adeygsatay hubka Kiimikada loona dulqaadan doonin arinkaasi…
Punland: Nus Milyan Shilinka Soomaaliga ah oo la amray in la gubo.
iftineducation.com – Maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa xukuntay in la gubo lacag been abuur ah oo dhowaan ay qabteen ciidanka ammaanka ee Puntland. Xeer ilaaliyaha maxkamadda, Bashiir Ismaaciil Axmed ayaa amray in la gubo lacagta oo dhan ku dhowaad nus bilyan shilinka Soomaaliga, taas oo lagu hayay bangiga maamulka qeybtiisa gobolka Bari. Bashiir wuxuu sheegay in lacagta sharci darrada…
Warbaahinta Qaar oo weeraray Amin Arts, Arintaasi oo jawaab deg deg ah laga bixiyey + Sawiro
iftineducation.com – Amin Arts waa farshaxaniiste Soomaaliyeed oo leh boga ugu caansan warbaahinta Soomaalida ee sida Online-ka ah barta internet-ka loogu daalacdo ee Aminarts.com ayaa maanta ilaa shalay website-yada Soomaalida qaarkood ay soo daabaceen qoraalo kuwaasi oo tusaale usoo qaatay sawiro uu sameeyey Aminarts. Balse Aminarts oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo dhex dhexaad ka ah isqabqabsiga siyaasada iyo iskooxeesiga balse cabira…
Qalbigu Waxa Uu Leeyahay Ereyo U Gaar Ah Oo Kordhiya Dareemidda Jaceylka.
iftineducation.com – Qalbigaa ku tebay hadii aanan saacado ku aragna waqtigu wuu ila dheeraadaa,dikaanka wadnaha wuxuu i noqdaa mid boobsiis ah marka aan hortaaganahay,ma hubo dareen nuucan ah inuu horey iisoo maray,laakin waxaan hubin karaa inaan kugu riyoodo dharaar iyo habeen,islamarkaana aan kuu riyaaqo Indhuhu wey kugu doogsadaan. Malaga yaabaa in waxa aan dareemaayo yahay jaceylkii dhabta ahaa ee buugaagta keliya…